ရန်ကုန်မြို့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ အားကစားကွင်းကို တစ်ချိန်က ဗြိတိသျှစစ်သေနာပတိ ဆာဝီလျံ၊ ဂျေ၊ စလင်းကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ''စလင်းကွင်း''ဟု အမည်မှည့်ခေါ်ခဲ့ ကြသည်။ ဆာဝီလျံဂျိုးဇက်စလင်း (Sir William Joseph Slim KG, GCB, GCMG, GCVO, GBE, DSO, MC, K St.J) ၁၈၉၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်၍ ဘာမင်ဂမ်မြို့ ကင်းအက်ဒဝပ်ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ သည်။ ကျောင်းမှထွက်သောအခါ အခြားအဆင့်ရိုးရိုးစစ်သည် အဖြစ် စစ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် မကြာ မီပင် ဗိုလ်သင်တန်းသို့ တက်ခွင့်ရပြီး ဝါစစ်ရှိုင်းယားတပ်ရင်း တွင် ဗိုလ်အဆင့်ရာထူး တိုးမြှင့်ခံရသည်။
အမှတ်(၁၄) ဗြိတိသျှတပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝီလျံစလင်း ၏ စစ်ဌာနချုပ်သည် မိတ္ထီလာမြို့တွင် တပ်စွဲနေစဉ် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် ၁၉၄၅ ခု၊ မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် စစ်ရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဝီလျံစလင်းထံ သွားရောက်တွေ့ဆုံလေ သည်။ ထိုသို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သွားရောက်ရာတွင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစလင်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ပုံရိပ်ကို သူ ရေးသားခဲ့သော ''အရှုံးမှအနိုင်သို့'' (Defeat into Victory)) စာအုပ်၌ အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့လေသည်။
''ကျွန်ုပ်အတွက် ဖြေရှင်းရန် ပြဿနာများ ကျန်နေသေး သည်။ ပြဿနာတစ်ခုမှာ ဗမာပြည် မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်၍၊ အခြားပြဿနာမှာ ဂျပန်တို့အား ပြန်လည်၍ တိုက်ခိုက်နေသော ဗမာ့အမျိုးသားတပ်မတော်အား မည်ကဲ့သို့ သဘောထား၍ မည်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံရမည်ဆိုသော ပြဿနာပင် ဖြစ်၏။ ဤတပ်မတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရန်သူအား ဒုက္ခပေးနိုင် လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်သည် ဗမာပြည်တိုက်ပွဲ အစကပင် ယုံကြည် နေခဲ့၏။ သို့သော် ဤတပ်မတော်၏ လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကို ကျွန်ုပ်တို့၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပူးတွဲ၍ မထားခဲ့ပါမူ၊ ဤတပ်မတော် သည် ဂျပန်တို့အား ဒုက္ခပေးခဲ့သလိုပင် ကျွန်ုပ်တို့အားလည်း ပြန်၍ဒုက္ခပေးနိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ် သိပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤဗမာ့အမျိုးသားတပ်မတော်တွင် ပါဝင်သော စစ်သည်တော် တို့အား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နှစ်သက်ကျေနပ်စွာ ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ သူတို့၏ ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်သော အောင်ဆန်းအား ကျွန်ုပ်၏ အမိန့်များကို လိုက်နာအောင် ပြုလုပ် ရေးပင် ဖြစ်၏။
ဉာဏ်စွမ်းနှင့် ရဲစွမ်းကြောင့် ရှေ့တန်းခေါင်းဆောင် ဖြစ် လာသော အောင်ဆန်းသည် ဗမာ့အစိုးရဖွဲ့ရန် များစွာ လိုလား လျက် ရှိသော်လည်း အောင်ဆန်းမှာ သူတို့ကြိုးဆွဲသည့်အတိုင်း 'က'မည့် ရုပ်သေး မဟုတ်ကြောင်းကို အနံ့ခံမိလာသော ဂျပန် အာဏာပိုင်တို့က အောင်ဆန်းအား ဗမာအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ် မတင်မြှောက်လိုဘဲ ရှိနေကြသည်။
ဂျပန်အာဏာပိုင်တို့သည် သူတို့ကြိုးဆွဲရာ 'က' မည့် 'ဒေါက်တာဘမော်'အား နိုင်ငံတော်အဓိပတိအဖြစ် တင်မြှောက် လိုက်ပြီးနောက် အောင်ဆန်းအား 'ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ် မတော်' (BDA) ဟု အမည်ပြောင်းလိုက်သော ဗမာ့အမျိုး သား တပ်မတော်၏ သေနာပတိအဖြစ်သာ ခန့်ထားလိုက်တော့ သည်။
သို့သော် အောင်ဆန်းအဖို့ ဂျပန်ကပေးသော လွတ်လပ် ရေး ဆိုသည်မှာ မည်ကဲ့သို့သော အဓိပ္ပာယ်ဆောင်သည် ဆိုသည်ကိုသိရန် အချိန်များစွာ မလိုပါချေ။ ကျားကြောက်၍ ရှင်ကြီးကိုး၊ ရှင်ကြီးကျားထက် ဆိုးသည်ကို အောင်ဆန်း သိလာတော့သည်။ အောင်ဆန်း၏ ထင်ရှားသော နောက်လိုက် တစ်ဦးက ကျွန်ုပ်အား တစ်ခါကပြောဖူးသော စကားမှာ ''အင်္ဂလိပ်တွေက ကျွန်တော်တို့သွေးကို စုပ်တယ်ဆိုရင် ဂျပန်တွေက ကျွန်တော်တို့ချဉ်ဆီ တွေကိုပါ စုပ်တယ်'' ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
အောင်ဆန်းသည် ဂျပန်တို့နှင့် ပို၍ပို၍ အပေါက် အလမ်းမတည့် ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၄၃ ခု စောစောပိုင်းတွင်ပင် အောင်ဆန်းက ဂျပန်အပေါ်တွင် ထားရှိသော သဘောထား များမှာ ပြောင်းလဲနေကြောင်းဖြင့် တောင်ပေါ် ကရင်အမျိုးသား များအကြားတွင် စွန့်စား၍ ကျန်ရစ်ခဲ့သော 'ဆီးဂရင်းမ်' ထံမှ သိရှိရသည်။
သူသည် ကျွန်ုပ်ထံမှ ကြားရသော စကားကြောင့် စိတ် ပျက်သွား ပုံရသော်လည်း သူ့အား မဟာမိတ် စစ်ဗိုလ်ချုပ် တစ်ဦးအဖြစ် ဆက်ဆံရန် ထပ်မံ၍ တင်ပြတောင်းဆိုပြန်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် အောင်ဆန်း၏ ရဲဝံ့ပုံကို စိတ်ထဲမှ အံ့သြ လိုက်မိပြီး နှုတ်မှလည်း ဤအတိုင်း ပြောပြလိုက်ပြီး ''ဗြိတိသျှ အစိုးရရဲ့ လက်အောက်ခံ တိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ ခင်ဗျားဟာ ဗြိတိသျှအစိုးရကို ပြန်ပြီး ပုန်ကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စကို ဘေးဖယ် ထားလိုက်ဦး။ ခင်ဗျားကို လူသတ်မှုနဲ့ အရေးယူဖို့ ပြောနေတဲ့ လူတွေ ကျုပ် ဌာနချုပ်ထဲမှာ ရှိနေတယ်။ သက်သေတွေရော၊ သက်သေခံပစ္စည်းတွေရော အားလုံးအသင့်ပဲ။ ခင်ဗျားတို့ကို ကျုပ် ဌာနချုပ်က ပြန်လွှတ်ဖို့ဆိုတာ ကြားလူတစ်ယောက်က ပြောခဲ့တဲ့စကားပဲ ဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားဆီမှာ ဘာမှ စာနဲ့ ပေနဲ့ ဝန်ခံထားတာ မရှိဘူးမဟုတ်လား။ ဒီတော့ ဒီကိုလာပြီး ဒီလိုတောင်းဆိုချက်တွေ လုပ်နေတာဟာ ခင်ဗျား အန္တရာယ်ကို ခင်ဗျား ရှာနေတာနဲ့ တူမနေဘူးလား'' ဟု မေးလိုက်၏။
''ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားဟာ ဗြိတိသျှစစ်ဗိုလ်ချုပ် တစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ'' (ဗြိတိသျှတို့သည် ကတိတည် သည်ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ပင် ဖြစ်သည်)
''ဗြိတိသျှတွေကို ဒါလောက်အထင်ကြီးနေရင်လည်း ဘာဖြစ်လို့ ဗြိတိသျှတွေကို မောင်းထုတ်ဖို့ ဒါလောက်ကြိုးပမ်း နေရတာလဲ''
''ဒါဖြင့် ခင်ဗျားက ကျွန်ုပ်တို့ အနိုင်ရနေတာ တွေ့နေ တော့မှ ကျုပ်တို့ဆီ လာတာပေါ့ ဟုတ်လား''
''ခင်ဗျားတို့ ရှုံးနေတုန်း၊ ခင်ဗျားတို့ဆီ ကျုပ်တို့လာလို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အကျိုးရှိမှာလဲခင်ဗျာ'' ဟု ရိုးရိုးပင် အဖြေပေး လိုက်ပါသည်။
ထို့နောက် အောင်ဆန်းက စစ်မြေပြင်တွင် ဂျပန်များအား တိုက်ခိုက် လျက်ရှိသော တပ်ဖွဲ့များကို ရိက္ခာထောက်ပံ့ပါ မည်လား၊ လစာပေးပါမည်လားဟု မေးမြန်းသည်။ ကျွန်ုပ်က အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အောင်ဆန်း၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကျွန်ုပ် လက်အောက်သို့ လာရောက် အမှုမထမ်းမချင်း၊ လစာနှင့်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေးပြဿနာကို စဉ်းစားနိုင်မည် မဟုတ်ဟု ဖြေပေး လိုက်သည်။ အောင်ဆန်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ နောက်ပိုင်းတွင် အောင်ဆန်းသည် သူ့ တပ်မတော်၊ သူ့အဖွဲ့ချုပ်၏ တကယ့် အခြေအနေမှန်ကို ပို၍ မြင်လာဟန်တူသည်။ သို့သော် သူသည် သူ့ 'အစိုးရ အဖွဲ့' နှင့် တိုင်ပင်ပါဦးမည်။ တစ်ပတ်အတွင်း ကျွန်ုပ်နှင့် ထပ်၍တွေ့ ဆုံ ပါဦးမည်ဟု မယုတ်မလွန်ပြောသဖြင့် သူနှင့် သူ့အမှုဆောင် အရာရှိများအား ၄င်းတို့စီးလာသော လေယာဉ်ဖြင့်ပင် ပြန်လည် ပို့ပေးလိုက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် အောင်ဆန်းအား တစ်ဖက်စောင်းနင်း တောင်းဆိုတတ်သော စေ့စပ်ညှိနှိုင်း၍ မရနိုင်သော ပြောက် ကျားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု အစက မျှော်လင့် ထားခဲ့ရာ သူနှင့် ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံရသည်နှင့် သူသည် ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသော ခေါင်းဆောင်မျိုးမဟုတ်ဘဲ နှိုင်းနှိုင်း ချိန်ချိန် ဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ကြောင်း တွေ့လာရပြီး အောင် ဆန်း အပေါ်တွင် များစွာ အထင်ကြီး၍ သွားမိပါတော့၏။ သူသည် အမျိုးကို အချစ်ကြီးချစ်သူ ဖြစ်သော်လည်း မိမိ၏ ဗမာလူမျိုးသာ ကောင်းသည်ဟု ထင်နေသော ဗမာစစ်ဝါဒီ သမား မဟုတ်။ လူမျိုးပေါင်းစုံကို ရိုသေလေးစားသော လူမျိုး ပေါင်းစုံဝါဒကို လက်ခံထားရှိသူသာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လည်း သူ၏ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များသည် တစ်ဖက် စောင်းနင်း မဟုတ်ဘဲ တရားမျှတမှု ရှိခဲ့သည်။ အောင်ဆန်း၏ 'စရိုက်'မျိုးကား ရှားပါဘိတောင်း။
ဤအချိန်၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေရာအနှံ့အပြားတွင် ဂျပန်နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ တပ်များနှင့် အောင်ဆန်း၏တပ်များ ပဋိပက္ခ မဖြစ်ပွားမီ အောင်ဆန်းတပ်များ ၏ 'အခန်း' ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဖြစ်ထားဖို့လိုသည်။
ဗမာ့အမျိုးသားတပ်မတော်မှ တပ်ဖွဲ့များသည် ရန်သူ သတင်းကို ထောက်လှမ်းရာ၌လည်းကောင်း၊ ရန်သူအုပ်စု ကလေးများကို ချေမှုန်းရာ၌ လည်းကောင်း များစွာ 'လက်သံ ပြောင်' လှပေသည်။
''အောင်ဆန်းကား ပေးခဲ့သောကတိ တည်ခဲ့လေသည် တကား'' ဟူ၍ သူ၏ ''အရှုံးမှ အနိုင်သို့''(Defeat into Victory) စာအုပ် စာ မျက်နှာ ၄၃၂ တွင် ရေးသားခဲ့လေသည်။
ဝီလျံစလင်းသည် မြန်မာပြည်ကို ဂျပန်များလက်မှ ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၁၉၄၅ ခုနှစ် တွင် အရှေ့တောင်အာရှမဟာမိတ်ကြေးတပ်များ၏ သေနာပတိ အဖြစ်ခန့်ထားခြင်းခံရသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာအတွင်းမှာပင် ၁၉၄၄ ခုနှစ် ''ဆာ'' (SIR) ဘွဲ့ဖြင့် သူကောင်းပြုခံရသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံးသွားသောအခါ ဗြိတိသျှစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးရာထူးဖြစ်သော ဖီးလ်မာရှယ် (Field Marshal) ခေါ် စစ်သူကြီးရာထူး တိုးမြှင့်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့်အဖြစ် CIGS ခေါ် ဗြိတိသျှအင်ပါယာလုံးဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အဖြစ် ခန့်ထားတာဝန်ပေးခြင်းခံရသည်။ သူသည် ၁၉၄၆ တွင် အင်္ဂလန်ပြည် ဘုရင့်စကောလိပ်ကျောင်း၌ ကျောင်းအုပ်အဖြစ် တစ်နှစ်ခန့် အမှုထမ်းခဲ့ရသေးသည်။
(1) Richard Mead, Churchill's Lions: A biographical guid to World War II. Stroud (US): Spellnont. 2007.